Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Sri Lanka tamin’ny Mey 2019
Sri Lanka · Mey, 2019
Tantara mikasika ny Sri Lanka tamin'ny Mey, 2019
Ady & Fifandirana19 Mey 2019
Ny 13 mey, trano teo amin'ny 500, fivarotana, masikiriny sy foibe ara-pivavahana hafa no simba, olona ray no maty ary folo hafa no naratra mafy. Nametraka ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina manerana ny firenena hatramin'ny 14 may maraina ny manampahefana, tao anatin'ny tahotry ny fiparitahan'ny fanafihana .
Azia atsimo: Mihaino bilaogy
Bangladesh06 Mey 2019
Azia atsimo, mihaino bilaogy
Manomboka ao Dhaka ny fihaonambe SAARC faha-13
Bangladesh04 Mey 2019
Nanomboka ao Dhaka, renivohitr'i Bangladesh ny andro nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy ny fihaonambe faha-13 ho an'ny Fikambanana Fiarahamiasa Ara-paritra ho an'ny firenena fito Aziatika Tatsimo (SAARC) ahitana an'i Bangladesh, Bhutan, India, Maldiva, Nepal, Pakistan ary Sri Lanka.
Saina fotsy: Misaona ny Sri Lankey
Ady & Fifandirana03 Mey 2019
Namono olona an-jatony nivavaka tamin'ny Alahadin'ny Paska 21 aprily 2019 tany Sri Lanka ny andiana daroba baomba voaomana. Anisan'ireo toerana enina voadaroka baomba ny fiangonana telo: ny fiangonana St. Anthony ao Kotahena, St. Sebastian ao Katuwapitiya ary ny Fiangonana Ziona ao Batticaloa. Nangonina iray andro taorian'ny fanafihana ny sary sy...
Bangladesh02 Mey 2019